Turkey - nyika iri panosangana makondinendi maviri | Inobatsira ruzivo kune wese munhu
Zviri muTurkey ndipo panowanikwa Mount Ararat, sekureva kweBhaibheri, Areka yaNoa yakavigwa.
Pano ndipo panotangira Tigris neYufratesi, iyo budiriro yeMesopotamia yekare yakabudirira.
Turkey - ruzivo rwekutanga
Guta guru: Ankara
Mari: Turkish Lira (TRY)
MuTurkey yanhasi kwaive neTroy, iro guta rinotsanangurwa muHomer's Iliad. Apa ndipo pakauya yakakurumbira Helena Trojan. Zvakare, Homer pachake anofungidzirwa kuti akabva kuAntalya, saiye mambo wengano Midas kana munyori wenhoroondo Herodotus.
Nzvimbo yaro pamharadzano dzeEurope neAsia yaisa Turkey munzvimbo inobatsira yezvematongerwo enyika kwemazana emakore. Turkey yave kutamba chinzvimbo chakakosha kuMiddle East.
Mamiriro ekunze muTurkey
Turkey iri mukati subtropical maritime mamiriro ekunze nzvimbo pamhenderekedzo yegungwa uye inodziya nyika kondinendi. Nharaunda dzemahombekombe ekumaodzanyemba nekumadokero dzinokanganiswa nemamiriro ekunze epasi ekusiyana kweMediterranean. Kumahombekombe ekuchamhembe kweTurkey, kune mamiriro ekunze eGungwa Dema ane hunyoro kupfuura hwekunze.
Ndeipi nguva yekuenda kuTurkey kunozorora?
Nguva yakanakisa yekuenda kuMediterranean neAegean Seas kubva muna Chivabvu kusvika Gumiguru. Iyo tembiricha haidonhe pazasi pe25 degrees. Zviri nani kuenda kuGungwa Dema muna Chikumi - Gunyana.
Chitubu uye matsutso anodziya uye zuva muTurkey, ino inguva yakanaka yezvekunze zviitiko uye kuona nzvimbo.
Chii chinonakidza uye kwekuenda kuTurkey?
Istanbul iguta riri panosangana makondinendi maviri uye budiriro, European uye Middle East. Europe neAsia zvakabatana neBosphorus Bridge.
Istanbul raive guta guru remasimba makuru matatu: Roma, Byzantine neOttoman.
Unogona kuyemura zvisaririra zvemadzimambo echiGreek nemaRoma uye imwe yemasikiti akanaka kwazvo pasi rose, iyo Blue Mosque ine hunhu hwayo minarets.
Kune mamwe machedhedral eByzantine uye makereke anoshamisa saHagia Sophia, iyo munhoroondo yayo yakashanda sechechi yeOrthodox, mosque yeMuslim, kereke yeGriki yeConstantinople, uye kereke yeRoma Katurike. Parizvino, iyo Hagia Sophia miziyamu.
Paunenge uri muTurkey, unogona kusarudza kubva kumakungwa mana: Nhema, Aegean, Marmara kana Mediterranean. Inonyanya kufarirwa pakati pevashanyi iAegean neMediterranean, pamwe chete inonzi seTurkey Riviera.
Izvo zvakakodzera kunanga kuCappadocia, inonakidza ngano nzvimbo yemwedzi inogadzirwa nemakomo anoputika. Kwemazana emakore, dzimba, machechi nedzimba dzemadzimambo zvakavezwa kubva kumatuff, ayo aunogona kuyemura nanhasi. Unogona kuongorora Kapadhokiya netsoka kana nebhasikoro, uye kuyemura zvinoshamisa dombo mafomu kubva mumhepo neanopisa mweya chibharanzi gondola.
Iyo inonyanya kufarirwa dhishi yeTurkey pasirese shashlik. Izvo zvakakosha kuti uzive kuti muTurkey izwi rekuti "shashlik" rinoreva kune dzakawanda dzakasiyana nyama ndiro. Kebab inogona kureva kwete chete nyama yakakangwa kana oblong cutlets yakaitwa kubva kune nyama yakakangwa, asiwo casserole kana muto wakakora.
Kuwedzera kune nyama kana miriwo ndiro kazhinji mupunga, kazhinji nezvinonhuwira nemiriwo, kana porridge diki reBulgur.
Yekunwa, yakasimba, inotapira tii inopihwa mint nezvinonhuwira, nepo Aryan iri mhando yemunyu wemukaka chinwiwa.
Zvinotyisidzira uye matambudziko muTurkey
MaTurkey anofarira zvekushanya uye Turkey inoonekwa senyika yakachengeteka. Kune zviitiko zvekuba uye kuyedza kunyengedza vashanyi, asi zvinowanzoitika matanho ekuzvidzivirira akakwana.
Izvo zvinofanirwa kuyeukwa kuti Turkey iri kunetsana nemaKurds. Muzhizha ra2012, pakati pezvimwe zvinhu, nekuda kwemamiriro ezvinhu muSyria, gakava rakawedzera, uye kurwisa kwemagandanga nekuputika kwakaitika muguta reGazantiep mudunhu reHakkari.
Turkey inyika inonamata, asi maTurkey, sevaMuslim, vanogona kutora chikamu mumhirizhonga inopesana neWestern, pamwe nevagari vedzimwe nyika dzechiMuslim, saka usati waenda, zvakakodzera kuti utarise kana Ministry Yezvekunze inokunyevera usati waenda kuTurkey kana imwe nharaunda. dunhu pane imwe nguva.
Turkey, zorora muna Gumiguru: wongororo
Nzvimbo dzakanakisa dze snorkeling
Turkey - Istanbul: rondedzero yeguta
Cote d'Azur, Turkey, Egypt
Cyprus, Limassol: wongororo
Posted in kufamba uye kutarisa
Mibvunzo ye58 mu database yakagadzirwa mu 0,553 masekondi.